Filimada galmada - Wikipedia
Duubista filim galmo
Filimada sawir-gacmeedka (pornos), filimada erotic, ama filimada galmada waa filimo soo bandhigaya mowduuc cad oo galmo ah si ay u kiciyaan una qanciyaan daawadayaasha. Filimada sawir-gacmeedka ah waxay soo bandhigaan riyooyin jinsi ah waxaana badanaa ku jira waxyaabo kiciya waxyaabo kacsi leh sida qaawanaan (jilicsanaan) iyo galmo (adag). Farqiga ayaa mararka qaar laga sameeyaa inta udhaxeysa filimada "erotic" iyo "qaawan" iyadoo lagu saleynayo in qeybta dambe ay kujirto galmo saaid ah, waxayna diirada saareysaa kacsiga marka loo eego sheeko xariirka, laakiin kala soocida ayaa ah mid si heer sare ah u shaqeysa.
Filimada galmada waxaa lagu soo saaraa laguna qeybiyaa warbaahin kaladuwan, waxay kuxirantahay baahida iyo tignoolajiyada laheli karo, oo ay kujiraan keydka filim dhaqameedka qaabab kaladuwan, Fiidiyowga Guriga, DVD-yada, Soodejinta Internetka, TV-ga cable, marka lagu daro warbaahinta kale. Maanta, filimada anshax darrada ah waxaa lagu iibiyaa ama lagu kireeyaa DVD; lagu muujiyey qulqulka internetka, kanaalada gaarka ah iyo lacag-bixinta-aragtida ah ee fiilada iyo dayax gacmeedka; waxaana lagu daawaday tiyaatarada qaangaarka ah ee sida dhaqsaha leh u lumay. Sharci ahaan, guud ahaan looma oggola in lagu muujiyo shineemooyinka caadiga ah, ama telefishanka hawada-bilaashka ah.
Kaliya 1970s, inta lagu gudajiray Da'da Dahabka ah ee Filimada Galmada, filimaanta galmada qeyb ahaan sharciyeysan; iyo 1980-yadii, filimada galmada ee fiidiyaha laga daawado waxay gaareen qaybsi ballaaran. Soo bixitaankii internetka dabayaaqadii 1990-yadii iyo horaantii 2000-yadii ayaa si isku mid ah u bedelay qaabkii loo qaybiyey filimada anshax darrada ah, taasoo sii murgisay nidaamyada faafreebka ee adduunka oo dhan iyo dacwadaha sharciyeed ee "fisqi".
Shaqaalaha iyo jilayaasha goobta filim galmo ee Australia
Pornography​—Harmless or Toxic? (Filimmada Galmada - Ma Dhibbaa mise Waa Sunta?) (en)
↑ theguardian.com (en)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Filimada_galmada&oldid=229007"